Wareegto gaadiidka AMISOM looga mamnuucay inay maraan wadada Maka Al-mukarama (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wareegto gaadiidka AMISOM looga mamnuucay inay maraan wadada Maka Al-mukarama (DHAGEYSO)
Wareegto maalintii shalay kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaaladda Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa gaadiidka ciidanka AMISOM looga mamnuucay inay maraan wadada Maka Al-mukarama laga bilaabo Isgoyska Sayidka (Oto-Oto) illaa Isgoyska Banaadir laga bilaabo saacadaha 6:00am subaxnimo illaa 12:00am habeenimo.
Wareegtadaan uu soo saaray guddoomiye Thaabit Cabdi ayaa ka dambeysay kadib markii ay muddooyinkii dambe soo bateen dhibaatooyinka ay gadiidka ciidanka AMISOM u geystaan dadka shacabka ah xilliyadda ay waddooyinkaasi isticmaalayaan, taasoo keentay muran sharciyeed iyo xal ka gaarista dadka AMISOM gaadiidkoodu jiiraan.
Sidoo kale, guddoomiye Thaabit ayaa wareegtadda ku mamnuucay in gaadiidka la dhigto dhinacyada wadooyinka Maka-Almukarama, KM4 illaa garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Illaa iyo haatan lama oga sida loo fullin doonno amaradaan uu soo saaray guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, waxayna arrintaan ka dambeysay kadib codsi ka yimid taliyaha ciidamada waddooyinka Cali Gaab oo cabasho badan usoo gudbiyaya guddoomiyaha.
Afhayeenka maamulka gobolka C/fitaax Cumar Xalane ayaa wareegtadaasi u aqriyay saxaafadda.